बिहानै खाली पेटमा के खाने के नखाने ?
काठमाडौँ । बिहानै उठेर तपाई जे खाने कुरा पहिला देख्नुहुन्छ के त्यहि खानुहुन्छ ? यदी यसो हो भने तपाई ठुलो भुल गर्दै हुनुहुन्छ ।
हतारमा आएर कयौं पटक हामी यस्तो गल्ती गरेर बस्छौ र खाली पेटमा जे पनि खान्छौ । यसरी खानाले हाम्रो पुरै पाचन प्रणालीमा नराम्रो असर पर्न सक्दछ । एसिडिटी, ग्याँस र चिसो जस्ता समस्या देखा पर्न सक्छ ।
यस्ता छन् खाली पेटमा नोक्शान पुर्याउन सक्ने खानाहरु :
कफीले खराब हुन सक्छ पुरै दिन
बिहानै उठेर कफी को बिना तपाईको काम सुरु हुदैन भने तपाईको यो बानी बदल्नु जरुरी छ । किनभने यसले एसिडिटि हुन सक्छ । छातीमा जलन हुन सक्छ र खाना पनि डाइजेस्ट हुदैन् । कफीले ग्याँस्टिक बढाउछ र खाएको कुरा पच्न पाँउदैन् । यसले हाइड्रोक्लोरीक एसिड बढाउन सहयोग गर्छ । जसले तपाईको ग्याँस्टिक बढाउछ ।
पराठाले बढाउछ एसिड
के तपाई बिहान बिहानै केही नखादै पराठा खान मन पराउनुहुन्छ ? तपाईको यस्तो बानीले तपाईलाई दर्द बढाउन सक्छ । किनभने खाली पेटमा मिर्च मसलाले तपाईको पेटमा लाइनिंग को प्रभावित गर्छ जसले पाचन प्रणाली खराब हुनुको साथै एसिडिटि हुन सक्छ ।
केरा खाली पेटमा नखाने
तपाई बिहान बिहानै केरा खाएर धेरै पोषक तत्व पाउने सोच्दै आनन्द महशुस गर्नु भएको हुन सक्छ । यद्यपि खाली पेटमा केरा खानु भयो भने तपाईको हार्टमा नोक्शान पुग्न सक्छ । केरामा म्याग्नेसियम र पोटासियम प्रयाप्त मात्रामा हुन्छ र यसलाई खाली पेटमा खानाले ब्लडस्ट्रीममा यसको मात्रा बढ्न जान्छ र यसले तपाईको मुटुलाई प्रभावित पार्न सक्छ ।
टमाटरले अल्सर हुन सक्छ
केही मान्छेहरु टमाटरको पोषक तत्व देखेर बिहानै टमाटर खान थाल्छन् ।यसमा टनिक एसिडको मात्रा धेरै हुन्छ । जसले तपाईलाई एडिसिटि तथा अल्सर हुन सक्छ । काँक्रो पनि खाली पेटमा पचाउन मुस्किल हुन्छ । र खाली पेटमा काँच्चो सब्जी नखानु नै राम्राने हुन्छ ।
२२ लाख युवायुवतीमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या
काठमाडौँ । पछिल्लो समय युवायुवती तथा बालबालिकामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढी देखिन थालेको छ । सात बालबालिकामध्ये एक तथा युवायुवतीमा पाँचमध्ये एकमा सो समस्या हुन सक्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रक्षेपण
उत्तर भारतको अग्रणी स्वास्थ्योपचार सेवाप्रदायक म्याक्स हेल्थकेयरको केन्द्र काठमाडौँमा
काठमाडौं। म्याक्स हेल्थकेयर, उत्तर भारतको एक अग्रणी स्वास्थ्योपचार सेवाप्रदायक संस्थाले आज एक समारोहबीच काठमाडौंमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न विरामी सहायता केन्द्रको शुभारम्भ गरेको छ । यसबाट केन्या, म्यानमार, इराक, इथियोपिया, नाइजेरिया र
के आफ्नो पिसाब पिउनु साँच्चै स्वास्थ्यको लागि उपयुक्त नै हो त ?
काठमाडौं । हामी दिसापिसाब भनेपछि मुन्टो बटार्छौँ । तर कतिपय यस्ता मानिस पनि छन्, जो स्वास्थ्यको लागि भन्दै आफ्नै पिसाब पिउने गर्छन् । हो, स्वमुत्रसेवन पिउने धेरै छन् सहरबजारमा ।
जमराको महत्व : स्वास्थ्यदेखि संस्कृतिसम्म !
काठमाडौं । आजबाट नेपालीहरुको ठूलो चाड दशैँ सुरु भएको छ । मानिसहरुले घरघरमा घटस्थापना गरी पूजाकोठामा जमरा राखेका छन् । जमराको महत्व दशैँमा विशेष छ भन्ने त सबैलाई थाहै छ